Taratasy ny herin ny mpisolovava Fiara (Mivarotra Fiara) - Taratasy Template - Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!
Taratasy ny herin ny mpisolovava Fiara (Mivarotra Fiara) - Taratasy Template
Ianao hivarotra ny fiara fa tsy afaka ho tonga amin'ny fotoana raikitra amin'ny hoavy tomponyFa tsy hanemotra ny raharaham-barotra, ny lahatsoratra ny sivily Fehezan-dalàna manome anao fahafahana mba hanome hery ny mpisolovava mba itokisana olona. Mba hanaovana izany, fotsiny dia soraty amin'ny taratasy izay manondro ny olona izay hanao sonia ny fifanekena ao an-toerana. Mamaritra ny sata ara-panambadiana, ny adiresiny, ary koa ny manokana sy hametahana azy ho any amin'ny e-mail ny dika mitovy ny maha-izy azy ny karatra. Miala any ny taratasy fanomezam-pahefana ny mpandraharaha amin'ny antontan-taratasy rehetra ilaina ho an'ny sale ny fiara. Aza adino ny mariky ny fahefana, ny mpandray eo anoloan'ny ihany koa ny tahirin-tsirin'i ny fanaovan-tsonia fanekena.
Izaho undersigned, (e) - Dramatoa Atoa (anarana), monina ao ny adiresy sy ny tompon'ny fiara: Manome hery ny mpisolovava mba Ramatoa Atoa (anarana), mipetraka ao, ny fivarotana io fiara io noho ny ny tantara. Ramatoa Atoa dia manao zavatra afa-tsy ho toy ny fitaovana Noho izany, dia manana adidy mba hampahafantatra ahy ny tena toerana ny raharaham-barotra.
Izy izy dia ho farany afaka manome sy hanaiky sy ny antontan-taratasy rehetra ilaina amin'ny fivarotana ny fiara. Kokoa, mifidiana iray akaiky mandray ny herin ny mpampanoa lalàna, toy ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana na ny hatry ny ela ny namana. Matihanina eo amin'ny sehatry ny fiara ihany koa no mitondra ny lohateny hoe mba handray izany fahefana. Ianao dia manana ny fanomezan-toky fa ny raharaham-barotra dia maka toerana any ny tena manome vahana ny toe-piainana, na dia eo aza ny tsy naha-teo. Araka ny lahatsoratra ny Fehezan-dalàna sivily, ny fe-potoana azo omena amin'ny alalan'ny ny marina act faty alohan'ny notary na eo ambany ny soratra tsy miankina, izany hoe, napetraky ny antoko politika ny tenany. Izany dia tsy soso-kevitra ny hanao izany am-bava, tahaka ny tamin'ny raharaha ny ady, dia tsy hisy porofo ny hanome amin'ny fitsarana.
maimaim-poana ara-dalàna fakan-kevitra an-tserasera sy amin'ny alalan'ny antso an-tariby: fanontaniana free mpisolovava
Erklæring om indkomst skat: sådan rapport. Ooreka